Iindaba - “kunyuko lwamaxabiso” kule minyaka mibini idlulileyo, maninzi amancinci naphakathi ……
“Ekunyukeni kwamaxabiso” kule minyaka mibini idlulileyo, uninzi lwamashishini amancinci naphakathi abakwazanga ukumelana nale ngcinezelo kwaye baye bacinywa ngokuthe ngcembe yimarike. Xa kuthelekiswa nengxaki abajamelene nayo amashishini amancinci naphakathi, amashishini amakhulu aneemveliso zobuchwephesha ngakumbi aneempembelelo ezincinci. Kwelinye icala, ngenxa yemfuno enkulu yezinto ezingafunekiyo ezivela kwiinkampani ezinkulu, izinto zokwenza izinto zeenkampani ezinkulu ngokubanzi zisebenzisa ikamva. Iimpawu zorhwebo lwexesha elizayo zenza ukuba iinkampani ezinkulu zikwazi ukuthenga ubonelelo bezinto ezingazinzanga zabathengisi kwiinyanga ezimbalwa ezizayo ngaphambi kokunyuka kwamaxabiso, nto leyo inciphisa kakhulu ifuthe lokunyuka kwamaxabiso emveliso ekrwada kwiinkampani. Kwelinye icala, iinkampani ezinkulu zixhomekeke kwitekhnoloji ePhambili kunye nolawulo lokuvelisa oluphezulu kwimakethi yaphakathi ukuya phezulu. Ixabiso elongeziweyo leemveliso liphezulu, kwaye ukubanako ukumelana nomngcipheko wokunyuka kwamaxabiso ezinto ezingathandabuzekiyo ngokuqinisekileyo kunamandla.
Ukongeza, phantsi kwempembelelo yokhuphiswano olupheleleyo lweemarike kunye noxinzelelo lwendalo esingqongileyo, amandla emveliso abuyela umva aye acoca, okonyuse ukuphuculwa kwetekhnoloji kolu shishino, ishishini lezihlangu libuyele kumkhondo olungileyo, kunye nesabelo sentengiso seenkampani eziphambili. kolu shishino kunyuke ngakumbi. Kwixesha elizayo, ngophuculo oluqhubekekayo lokugxila kwimarike, umgangatho kunye nenqanaba leshishini lezihlangu laseJinjiang liya kuzisa iimeko ezifanelekileyo, imveliso iya kugxila ngakumbi, kwaye imarike iya kuzinza ngakumbi.
Ngapha koko, ukongeza kwezi ziingcali zetekhnoloji kwintengiso, ezinye iinkampani zobuchwephesha ezisezantsi sele zenzile impumelelo kwimveliso ekrelekrele yempahla. Umzekelo, uphawu lwangaphantsi lwe "Jiaoyi" lubumba kwakhona ukuthengwa kwempahla ngedatha enkulu kunye nemveliso ekrelekrele ukufezekisa ingeniso ephezulu kunye nengeniso esezantsi. Uluhlu lweempahla lusondele kufutshane. Itekhnoloji yeXindong yasekwa ngo-2018. Itekhnoloji yokulinganisa eyidijithali ye-3D eyenziweyo ngokusebenzisana neZiko laseTshayina loLwazi lwamalaphu livumela amalaphu ukuba asebenzise ubuchwephesha bedijithali, enceda iinkampani ukuba zikhawulezise ukubonakalisa imveliso kunye nentengo yangaphambi kwentengiso, kunye nokunciphisa amalaphu 50% zophando kunye neendleko zophuhliso kunye ne-70% yeendleko zokuthengisa zabenzi kunye nabanini beebhanti bawufinyele umjikelo wokuhanjiswa ngu
Ukuthunyelwa ngaphandle kwezambatho ngoku kukwiqondo lokunyuka kwamandla, intengiso yokuthengisa + ebusika ebandayo inceda ukusetyenziswa kwempahla
Bechatshazelwe ngubhubhane kwisiqingatha sokuqala sonyaka, ngaphezulu kwe-80% yengeniso yeenkampani zeshishini eyehlayo yehlile, echaphazele kakhulu impumelelo yecandelo. Ngokwedatha evela kwiCandelo loMphathiswa Wezemveliso kunye neTekhnoloji yoLwazi, ngo-Agasti, ukuthunyelwa ngaphandle kwempahla kunyuke nge-3.23% unyaka nonyaka, yayilixesha lokuqala ukukhula okuhle okuthe kwakhona kwenyanga emva kwenyanga ezisixhenxe zokukhula okungalunganga kunyaka.
Ngo-Septemba, i-2020 yeSizwe "yeNyanga yokuPhakanyiswa koSetyenziso" ehlelwe liSebe lezoRhwebo kunye neCentral Radio, iSikhululo seFilimu kunye neTelevishini kunye "neshumi elinanye" iholide yomthendeleko waba nefuthe elikhulu kwishishini leempahla kunye nelaphu. Ukulandela okulandelayo "kabini elinanye" kunye "nokuphinda kabini 12 imisebenzi yokunyusa iya kuqhubeka nokwandisa ukusetyenziswa kwamalaphu nempahla. Ukongeza, uLawulo lweMeteorological lwase China lwathi ngo-Okthobha u-5 ukuba umsitho we-La Niña kulindeleke ukuba ubekhona kulo busika, obhekisa kwimeko yamanzi abandayo anamaqondo obushushu ashushu olwandle kumbindi weikhweyitha nakwimpuma yePacific kwaye afikelele kwinqanaba elithile amandla kunye nobude bexesha. Imozulu ebanda kakhulu kobu busika ikhuthaze kakhulu ukusetyenziswa kweempahla zasebusika.
Ibhodi ye-Insole noEva, Inaliti Punch Nonwoven Ilaphu, Ibhodi ye-Insole Board ene-Eva, Ilaphu elingenagwele kunye noEva, Ilaphu nonwoven elaminethiweyo kunye Eva Foam, Iphepha lezinto ze-Shoe Insole,